Intambo yaseChina Leon enezihlalo ezi-2 Imboni kanye Nefektri |I-Tailong
Intambo kaLeon enezihlalo ezi-2
Beka iqoqo likasofa we-Leon osezingeni eliphezulu nelingaba yimibono evelele ezingadini noma emagcekeni angemuva.Leli qoqo elelukwe ngesandla lakhiwe kahle kusetshenziswa uhlaka lwe-aluminium olumbozwe ngempushana, olusongwe ngothando ngentambo eyisicaba ye-olyfin emise iphethini elukiweyo “ye-twist inhlama ethosiwe”.Kanye netafula lekhofi elihambisana ne-aluminium slat linikeza isikhala esanele sokubeka izingilazi ezimbalwa zeziphuzo ezibandayo kanye nokudla okulula endaweni yokuphumula, esanda kungena endaweni enhle nengxoxo ejabulisayo nabangani noma nini.
L149 x D70 x H65/78 cm
Faka intambo ebunjiwe ye-tint engathathi hlangothi emise iphethini elukiweyo ethi "i-twist inhlama ethosiwe" ihlangana nohlaka lwe-aluminium oluqinile olugcotshwe ngempushana ngombala omhlophe ukuze uveze ukubukeka okumangalisayo futhi ulethe ubuhle besimanje obulula endaweni yakho yokuhlala yangaphandle kulo lonke ihlobo.
Nikeza ngendawo yokuhlala ewugqinsi ethokomele kanye nomcamelo ongemuva, kanye nomcamelo othambile wangemuva oyiklamo eyingqayizivele, uvele uncikiseke nje futhi ube negwebu eliningi elimaphakathi elisekelayo elingaphumuza ikhanda lakho futhi ujabulele ukukhanya kwelanga.
UMQEQESHO OZInzile Wemilenze Yemilenze Yesilinda
Imilenze emincane yesilinda enamakepisi onyawo epulasitiki abonisa ngale ukugwema imihuzuko phakathi kwephansi nokwengeza ubuhle obuvela kuyo yonke.Ngaphezu kwalokho, kuthuthukisa ukuzinza kwesethi.
Isethi kasofa wezintambo
* Umbala wokumboza ungenziwa ngezifiso
* Amahora angu-1200 intambo ye-Olyfin
* Umbala wezintambo ungenziwa ngokwezifiso
*Umbala wendwangu ye-Cushion ungenziwa ngokwezifiso.
U-Leon onezihlalo ezi-2
Nikeza iwaranti yeminyaka engu-2-3.
I-Leon Rope Sofa Set Disply
Indawo yesithombe: Guangzhou,China Isikhathi sokuthatha izithombe: Ephreli.2022
Isihlalo sokudlela sentambo kaLeon
Intambo kaLeon usofa oyedwa
Leon alu.itafula lekhofi
Okwedlule: Intambo kaLeon usofa oyedwa
Olandelayo: Leon alu.Itafula lekhofi (KD)
I-Norland rope 3-seat sofa(Teak armrest)
I-Santo rope 2-seat sofa
Intambo ye-Latina enezihlalo ezi-2
Intambo yobuciko usofa wezihlalo ezi-2
Intambo yobuciko usofa wezihlalo ezi-3